कोरोना लागेपछि अक्सिजन घटन सुरु हुन्छ यस्तो बेला अक्सिजन घट्न नदिन के गर्ने? « Niatra TV
काठमाण्डौ, बैशाख १८ । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नराम्ररी भारतमा अहिले अक्सिजन अभावका कारण कैयौँ बिरामीहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। नेपालमा पनि अहिले जटिल अवस्थाका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको र अस्पताल भर्ना भएका धेरैलाई अक्सिजन दिनुपरेका विवरणहरू आइरहेका छन्।
उनीहरूले विदेशबाट नयाँ सिलिन्डर ल्याउने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। “पूर्वतयारी भएको हुन्थ्यो भने सरकार सरकारबीच सहमति गरेर द्रूत गतिमा ‘फास्ट ट्र्याक’बाट ल्याउने कुरामा सहजीकरण गरिदिनुपर्थ्यो। घर्किसक्यो समय। सिलिन्डर राज्यले एअरलिफ्ट गरेर ल्याउने हो भने कोभिडको विकराल समस्या पर्दा बिरामी बचाउन अवसर हुन्छ,” एक जना अक्सिजन उद्योग सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरेले बीबीसीसँग भने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता समिर अधिकारीले विदेशबाट नयाँ सिलिन्डर खरिद गरेर सहज रूपमा ल्याउन कठिन हुने बताउँदै त्यसका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिए।
“खरिद गरेर मात्रै पाउने अवस्था देखिन्न अहिले अक्सिजन सिलिन्डरका हकमा। कुनै विशेष किसिमको कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने देखिएर त्यसका लागि कामहरू अघि बढेका छन्,” डा. अधिकारीले बीबीसीसँग भने। “दक्षिणी छिमेकी देश भारतबाट केही पनि ल्याउन सकिने अवस्था छैन। हाम्रो प्रयास चाहिँ जहाँ सङ्क्रमण कम छ र उत्पादन बढी छ ती देशहरूमा प्रयास गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले समन्वय अघि बढाइसकेका छौँ।”
यसको ‘खासै ठूलो’ उपाय केही पनि ‘नभएको’ सुवेदी बताउँछन्।”सकेसम्म फोक्सो स्वस्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पहिले देखिनै तपाईँले तयारी गर्ने हो। चुरोट खाइरहनुभएको छ भने छाड्ने। स्वास्थ्यकर बानीबेहोराबाहेक अन्य केही उपाय छैन।”
अक्सिजन कम हुन लागेको सङ्केत देखिए सुत्दा घोप्टो पर्नु राम्रो हुने उनको सुझाव छ। “गाह्रो भए कोल्टे पर्ने। सकेसम्म उत्तानो परेर नसुत्ने। त्यो विचार गर्न सकिन्छ। त्यसले फाइदा गर्छ भनेर देखाएको छ। त्यो चाहिँ प्राय अक्सिजन घटिसकेका मान्छेलाई हामी सुझाउँछौँ। अक्सिजन घटेको जस्तो आफूलाई लाग्छ भने त्यस्तो अभ्यास गर्दा हुन्छ,” उनले भने।